मनिफोल्ड GIS प्रयोगकर्ताहरू कहाँ छन्? - Geofumadas
फेब्रुअरी, 2010 मितोल्ड GIS
केही समय अघि, टेक्नोलोजीहरूको डच गुरुले यो वाक्यलाई यसो भने:
"इमानदारीपूर्वक, मनिफोल्ड पृष्ठले के भन्छ भनेर म छक्क परें। के हुन्छ त्यो यो हो कि मैले यो कहिले पनि मेशिनमा सञ्चालनमा देखेको छैन "
यस हप्ता, पैट्रिक वेबर-स्थानिक नॉलेज- ले एक लापरवाह बयान दियो जुन निश्चय पनि यस उपकरणको सिर्जनाकर्ताहरूको धेरै दाह्री डराएको छ। जे होस् उनीहरू ... उनीहरूको दाह्री छ विश्वास गर्दैनन्, तर म यसलाई अनुसरण गर्नका लागि प्रतिबिम्बमा ल्याउँछु भविष्यवाणी - सेकेन्डहरू यस वर्षको।
मनिफल्डको समस्या के हो?
पैट्रिक ज्याफ्रे ए मोोर को सिद्धान्त मा आधारित छ, उनको पुस्तक मा "क्रिसमस पार गर्दै", जसले जीवन चक्र को रूपरेखा बनाउँदछ जुन कम्प्यूटर उत्पादनहरू लाई ग्रहण गर्दा हुन्छ। ती महत्त्वपूर्ण चरणहरू मध्ये एकलाई एबिस (चसम) भनिन्छ, जहाँ सफ्टवेयरले बृद्धि हुने प्रतिनिधि खण्डमा कहिले पनि पुग्न सक्ने जोखिमबाट बच्न, प्रारम्भिक इच्छुक क्रेताहरूले अ emb्गालेको बेला निरन्तर बृद्धि गर्न आवश्यक छ।
प्याट्रिक मनिफोल्डको निर्माता कम्पनीको नयाँ स्तर, मूल्य निर्धारण मोडेल र फोरममा प्रयोगकर्ताको सहयोगसँग आफ्नो सन्तुष्टि स्पष्टसँग बोल्दछ। तर यो व्यापार ढाँचा मा एक एकदम नाजुक मुद्दा आलोचना गर्दछ, किनभने कि आफ्नो पेज मा पुनर्विक्रेता वा प्रतिनिधिहरु को छैन अन्यथा को आग्रहमा, यद्यपि यो एक योगदान गर्न योगदान गर्दछ। स्वीकार्य मूल्ययो एक फोकलङ विकास रोक्न सक्छ।
यसको लागि, यसले तथ्याङ्क ल्याउँछ मनिफल्ड फोरम, जहाँ हामी सबैलाई के देखाउँछौं भनेर देखाउँछौं: जो लोग 7x संस्करण हो 8x मा जाने को कारण नहीं पा सकते र 9x संग के हुन्छ भने के यो देखने को इंतजार गर्दै छन् कि यो तय गर्छ कि यो चाल या नहीं। यो पूर्ण सन्तुष्टि हुन सक्छ, तर यदि माइग्रेसनले प्रति इजाजतपत्र only represents० को मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ, हामीले अन्य कठोर असरहरू बारे सोच्नु पर्नेछ जस्तै अपरिवर्तनीय ढाँचा परिवर्तनको रूपमा, - उदाहरणको रूपमा - तपाईं संस्करण to देखि from देखि .map पास गर्न सक्नुहुन्न र यसले सबै सार्ने संकेत गर्दछ। अवस्थित लाइसेन्स निर्मित विकास वा प्रयोगकर्ता म्यानुअलहरूको बारेमा के भन्न हुँदैन, जुन निश्चित रूपमा विस्तृत गरिएको हुनुपर्छ किनकि म्यानिफोल्डले केवल "मलाई सहयोग गर"उहाँको बाटोमा।
के भइरहेको हुन्छ, त्यसो भए, कि मेनिफोल्ड जिफुमरहरूको लागि त्यो सुन्दर रकेट जहाज हुन जारी रहनेछ तर यसले साधारण प्रयोगकर्ताहरूलाई कहिले पनि अपील गर्न सक्दैन। उनीहरूले आफूलाई चाहेका जुनसुकै तर्कमा धर्मीकरण गर्न सक्छन् -त्यो निश्चित छ- तर ईआरआरआई मा पागल को खरोंच ArcGIS भन्दा राम्रो सफ्टवेयर हुनु भन्दा अधिक आवश्यकता छ -कि धेरै कुरामा यो छ र धेरै छन्-। तपाईंले समुदाय निर्माण गर्न आवश्यक छ, सहयोगीहरू पनि छन् जो पनि जित्छन्, अर्को भाषामा भौगोलिक स्थान, गैर-टोकन-आधारित समर्थन, "टेक ईभान्जलिस्टहरू" र विडंबनाको रूपमा पाइरेसी सहित।
कुनै पनि समयमा सफ्टवेयरलाई डिमिरेट गरिएको छैन, तर सबै एक समयमा हामीले सामान्य कम्पनीहरूमा काम गरेका छौं, जसलाई किन्नको लागि मानव सम्पर्कको आवश्यक पर्दछ, त्यहाँबाट समर्थन, प्रशिक्षण र इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया (सबै कोर्सको भुक्तान)। उस्तै Bentley Systems यसमा यसको बिक्रीलाई क्षेत्रीय रूपमा व्यवस्थित गर्नका लागि बाधा छ, जसले काम गर्दछ तर लेनदेन ढिलाइ गर्दछ जुन तिनीहरू स्थानीय मुद्रा होइनन्, प्राय जसो अतिरिक्त प्रक्रिया हुन्छ। मनिफोल्डको केसले भन्न नपरोस्, कि खरिद अनलाइन हुनुपर्छ, क्रेडिट कार्डको साथ, कुनै औसत नगरपालिका र सबै कम्पनीहरूमा एक छैन भन्ने तथ्यबाट सुरू हुन्छ; र हामी मध्ये सबैले यो अनुभव गरेका छौं, हामीलाई थाहा छ कि बैंक स्थानान्तरण मार्फत खरीदहरूको पारंपरिक वातावरणमा उनीहरूको जटिलताको स्तर हुन्छ।
आह! म समर्थन बिर्सें। एक मनिफोल्ड लाइसेन्स दुई संग आउँछ टोकन, समर्थन गर्न केवल दुई प्रश्नहरूको लागि। यदि तपाईं अधिक चाहनुहुन्छ भने, यसको लागि तिर्नुहोस्; विचार खराब छैन, तर यो कार्यात्मक छ कि भनेर हेर्न आवश्यक छ। यो त्यस्तो होइन chin मानिसहरूलाई, तर निमन्त्रणाको तीन शब्दहरू जब सफ्टवेयर खरीद गर्न पर्याप्त छैन: "स्थापना - सुरुवात - सिक्नुहोस् ", किनकी यो एक मालिक को समझाने को लागि मुश्किल हुनेछ कि नयाँ वर्ष को ओपरेटिंग प्लान मा 15 को लागि बजेट छोड्नु आवश्यक छ टोकन वा च्याट समर्थनको लागि भूफुमाड सम्पादक तिर्नुहोस् :)।
तल लाइन: मनिफोल्ड एक महान सफ्टवेयर हो, तर यो बढिरहेको छैन। यद्यपि संस्करण already पहिले नै टोरेन्टमा अवस्थित छ, यो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ भन्ने संकेत, वेबमा धेरै थोरै मानिसहरूले यसको क्षमताको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्, ग्राहक सेवा मोडेलसँग उनीहरूको सन्तुष्टिको बारेमा कम। यदि यो यस्तै जारी रह्यो भने, यो विशेषज्ञहरूको एउटा विशेष समूहको लागि खेलौना रहनेछ र जीआईएसको व्यावहारिक समाधानको रूपमा लोकप्रियता गुमाउनेछ - जुन त्यो हो। र यस प्रकारको उपन्यासको अन्तिम अध्याय, हामी सबैलाई यो थाहा छ।
के आशा गर्न
एकातिर, मनिफल्डका साथीहरूले उनीहरूको अहंकार कम गर्छन्। विशेष रूपमा, मलाई अद्भुत लाग्ने सफ्टवेयरको विवेकी नगरी, जुन म निरन्तर प्रयोग गरिरहेको छु र जसको बारेमा मैले कानमा बोलेको छु, मैले फोरममा गरेका प्रश्नहरूको जवाफ देखेको छु जुन विक्रेताको न्यानो हुँदैन तर बोलिभेरियन एलायन्सको अध्यक्ष हो। यसले के भन्छ "यो मेरो सरकार हो, यहाँ म आदेश गर्दछु, र यो मनपर्दैन, च्यानल परिवर्तन गर्नुहोस्"।
पक्कै माफी माग्न को लागी, ती मानिसहरु जसले यस प्रकारको उपचार मन पराउँछन् र दक्षिणी शंकु को देशहरु बाट मलाई भेट्न। तर यदि गेब्रियल ओर्टिजको फोरममा - जो नि: शुल्क छ - हामीले खराब जवाफका कारण साथीहरू हरायौं, सफ्टवेयरका निर्माताहरूले स्वतन्त्र प्रतिक्रिया नदिने ठाउँमा यस्तो ठाउँमा भन्नु हुँदैन।
एक दिन मैले उनको प्रश्न गरे विज्ञापन विभाग, यसको अर्को व्यापार नैतिकता, र आज, म के भन्छु भनेरमा जिद्दी गर्दछु: एक राम्रो प्राविधिक एक राम्रो प्रबन्धक हुन आवश्यक छैन, एक राम्रो प्रतिभावान एक छेउको छेउमा एक घटिया व्यापारी हुनबाट। त्यहाँ विशेषताहरू छन्, र कुनै पनि टेक गुरु जो सफ्टवेयर विक्रेता बन्छ त्यसलाई आधारभूत ग्राहक सेवा कोर्स र उनीहरूको मार्केटरबाट आदिम पाठहरूको आवश्यकता पर्दछ। NET एपीआईमा के आउँदैन।
मनिफोल्डलाई के हुन्छ? त्यो निश्चित रूपमा यसको सिर्जनाकर्ताहरूमा निर्भर गर्दछ। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ प्याट्रिकको चेतावनीले सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्दछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो दशमलवमा डिग्री / मिनेट / सेकेन्ड बदल्नुहोस्
अर्को पोस्ट कसरी गैर भौगोलिक नक्शा देख्दछन्अर्को »
१ Rep मा जवाफ "मनिफोल्ड GIS प्रयोगकर्ताहरू कहाँ छन्?"
हेहे, मलाई भन्नुहोस् कि म तिनीहरूलाई जस्तै सोच्न आएको छु।
म्यानफिल्डले उनीहरूले मलाई धेरै उत्तर दिए (यो अन्यथा हुन सक्दैन) धेरै प्रकारको तर मानक मेलको साथ।
मेरो विचारमा तपाईंले 8 किन्नुपर्दछ, किनभने त्यहाँ सुरक्षा छैन जब9आउँछ। थप रूपमा, जब नयाँ संस्करण आउँदछ सामान्यतया माइग्रेट गर्न प्रमोशनल समय हुन्छ जसको लागि मात्र यूएस $ 50 खर्च हुन्छ।
मेरो प्रश्न छ कि मलाई थाहा छैन यदि यो अरूलाई चासो लिन सक्छ।
8.0 गुप्तिकरण किन्नुहोस् वा9बाहिर आउनु पर्खनुहोस्?
मैले भर्खरै मेरो कम्प्युटर परिवर्तन गरें र मलाई थाहा छैन कि मेरो 6.5 संस्करण स्थापना गर्न र 9.0 बाहिर आउनु वा 8.0 लाई खरीद गर्न र स्थापना गर्न पर्खनुहोस्।
म यसलाई कहिलेकाँही र मुख्यरूपमा हाईकिंग प्रोजेक्टहरूको लागि नक्सा सम्पादन गर्न प्रयोग गर्दछु, करीव कुनै विश्लेषण बिना नै, म गर्न चाहान्छु।
मेरो साथमा केहि समस्या छ। मैले एक क्षेत्र को सतह बंद गरेको छु र म orthophotos superimpose गर्न चाहते हो, तर यसको लागि मलाई एक को एक को कटौती गर्नु पर्छ। जब म गुप्त बचत गर्दछु मैले त्रुटि प्राप्त गर्दछु:
स्ट्रिममा डेटा भेट्न सक्दैन
यो केहि गर्दछ, तर वास्तवमा यसलाई जडान नगर्नुहोस्, तर छवि आयातको रूपमा। यहाँ यसले कसरी देखाउँछ । अर्को सीमितता यो छ कि यो कालो र सेतोमा आउँदछ, यद्यपि Plex.Earth आफै खरिद गर्न सकिन्छ र colorsहरू र उत्तम शुद्धताका साथ गर्न सकिन्छ।
स्वत: डेस्कटप भन्छिन्:
यदि म गलत छैन भने, मलाई लाग्छ कि तपाईं Google Earth मा Autodesk ल्याण्ड जोड्न सक्नुहुन्छ। Autodesk भूमिसँग GIS कार्यहरू छन्।
हो, तपाईं यसलाई Google धरतीमा गर्नुहुन्छ, भर्चुअल पृथ्वी, याहू नक्सा, पहिले नै स्ट्रीट नक्सा खोल्नुहोस्, एक भौगोलिक स्तरको रूपमा (पक्कै छविहरू)।
एक पटक छवि प्रदर्शित भएपछि, विकल्प "अनलि "्क" दिन सकिन्छ, छवि स्थानीय रूपमा भण्डार गरिएको छ, सेट गर्न सकिने सटीकको लागि, र पहिले नै जियोरेफरेन्स्ड। तपाईं यसलाई जिओड डाटाबेस (.map ढाँचा) भित्र छोड्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई बाहिर भण्डार गर्न अर्को ढाँचामा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सन्दर्भको रूपमा छोड्नुहोस् (लिंक गरिएको)
के यो भन्दा बढी GOOGLE को लागि मनिफल्ड जडान छ यदि यो एक बर्ष भन्दा बढी थियो?
मैले बिर्सें, पाठकहरूको संघमा अभिवादन गरें।
पहिले नै टिप्पणीहरू एकै पोष्ट भन्दा लामो छन्।
1 संस्करण: न्यूनतम ArcGIS भन्दा लगभग उस्तै (वा कम), मेरो विचारमा यो gvSIG भन्दा बढी छ।
जियोप्रोसेसेसको गति, यो धेरै बलियो छ। पनी अन्तर्क्रिया गर्न विकल्पको साथ GPU 64 बिट्समा!
एकैसाथ तह प्रबन्धन, राम्रोसँग गर्दै। यसमा पनि यसको परम्परागत तर्क आधा दुर्लभ छ, किनकि तहमा बहुभुज, रेखा र पोइन्टहरू हुन सक्छन्।
Inter. इन्टरओपेरेबिलिटी… डाटाबेस र रास्टरको साथ, यो उत्कृष्ट छ, दुवै भू-सम्बन्धी भण्डारण, भण्डारण, अनुक्रमणिका र सेवाको लागि।
मानकहरूसँग, आधा छोटो जानुहोस्, wms (ग्राहक / सर्भर) wfs (सर्भर मात्र) यो धेरै खराब छ।
साधारण GIS वेक्टर डेटाको साथ राम्रो राम्रो (shp, kml, xml, etc), यद्यपि फाइदाको रूपमा उनीहरूले लेयरको रूपमा जीडीबीमा आयात गर्नु पर्छ, केवल जडान र डेटाबेसलाई मात्र लिङ्क प्रदान गर्दछ।
सीएडीमा यो सीमित छ, यो सामान्य प्रयोगको हालको ढाँचामा धेरै अग्रिम छैन, dwg, dxf र dgn, शायद तिनीहरूले खुला खुलामी, v7 र 2000 द्वारा समर्थित।
4 चौथो बिन्दु: पूर्ण रूपले अनिश्चित, विशेष गरी यदि तिनीहरूले उच्च मूल्यको वाणिज्यिक सफ्टवेयरको बिरूद्ध ती आक्रोश कायम राख्छन्, जससँग गठबन्धनहरू चाँडै वा पछि बनाउनुपर्दछ। तिनीहरू Dgn र dwg जस्ता ढाँचासँग असंगतिलाई विशेषता दिन्छन्, जहिले पनि जाँच्दछ कि राक्षस सफ्टवेयर बन्द छ र धेरै केसहरूमा अप्रचलित हुन्छ।
यो होइन कि तपाईंले अटोडेस्कमा श्रद्धाञ्जलि तिर्नु पर्दछ, तर पुरुष, ढिलो वा चाँडो तपाईंले ग्राहकलाई बुझ्नुपर्दछ र गठबन्धनहरू आवश्यक छन्। प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा उनीहरूको स्वरले उनीहरूले एनिएसआईएसआरआई हो भन्ने धारणा दिन्छ, तर तिनीहरू एन्टिमाइक्रोसफ्ट छैनन्, किनभने उनीहरू एसक्यूएल सर्भर पढ्छन्, तिनीहरू आईआईएस मार्फत मात्र सेवा गर्दछन् एन्टिलिनक्स जस्तो देखिन्छ जब तपाईं अपाचेको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ।
जसले अनुप्रयोगहरू विकास गर्छन् यो एक राम्रो विकल्प हो, जहाँसम्म मैले मनिफोल्ड प्रयोगकर्ताहरूसँग कुरा गरेको छु, तिनीहरू सँधै सन्तुष्ट छन्, जससँग सब भन्दा उन्नत टेलिस्कोप छ। तर यस सफ्टवेयरमा, उत्तम टेलिस्कोपमा कब्जा नगर्नुहोस्, कहिलेकाँही सबै जनासँग भएको राम्रो हुन्छ, सेवा बिक्री, प्रशिक्षण र सूचना आदानप्रदानका पक्षहरूको लागि।
केवल ग्रिन्टको कारणले तपाई MANIFOLD सँग दिनुहुन्छ, तपाई उत्सुक हुनुहुन्छ। सत्य यो हो कि इजाजत पत्र सस्तो छ। तपाईंले केहि उपकरणहरूमा टिप्पणी गर्नुभयो जुन उत्पादन खरीदका लागि मूल्यवान छ। शंका: 1। GvSIG-ArcMap को तुलनामा सम्पादन उपकरणहरुको बारेमा के छ?2जियोप्रोसेसेसको गति र एक साथ धेरै तहहरूको व्यवस्थापन।3इन्टरओपेरेबिलिटी4अनिश्चित भविष्य, विशेष रूपमा उदय र नरम-मुक्तको विकासको कारण केवल तीन जनाले मलाई विश्वास गरी माथि उल्लिखित कार्यक्रमहरू सुधार गर्दा म सफ्टवेयरको बारेमा अलि बढी अनुसन्धान गर्नेछु।
अर्डरली ... गाह्रो कुरा तपाई साथीलाई सोध्नु हुन्छ। म कसम खाँन्छु एक दिन, तर अहिलेको लागि:
विशाल सफ्टवेयरको लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान मूल्य निर्धारण मोडेल हो। त्यो निर्विवाद छ, किनकि $ 235 बाट $ 900 मनिफोल्डले (लगभग वा अधिक) तपाईं के गर्नुहुन्छ आर्कइन्फो, आर्कएसडीई, आर्कआईएमएस, म्यापोब्जेक्ट्स, आर्कजीआईएस सर्भर र केही थप विस्तारहरूको साथ। यसले time 120 बाट रनटाइम लाइसेन्स समावेश गर्दैन।
नि: शुल्क सफ्टवेयरको रूपमा, युद्धले यो व्यक्तिगत रूपमा जित्छ, तर सामूहिक परिपक्वताको साथ तिनीहरूले हासिल गरेका छैनन्।
हुनसक्छ मैनिफोल्डले जे आशा गरेका छन् त्यसले अरूको सामु कामहरू गर्ने उसको नवीनता हो। ती मध्ये म म जस्तै चीजहरूको बारेमा सोच्न सक्छु:
Google Earth / Google Maps / Virtual Earth / Yahoo Maps / Open Maps for Connection like no other, done from 2006, तपाईं आज स्काइममैप संग छवि डाउनलोड गर्न सक्षम हुनु।
- एक धेरै व्यावहारिक जियोडाट डाटाबेस (.map) ढाँचा एकीकृत गर्नुहोस् जुन तपाईं उही सफ्टवेयरबाट ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईलाई Mapserver + postgreSQL + gvSIG वा समान संयोजनहरूसँग गर्नको लागि राम्रो समयको लागी खर्च हुनेछ। बाह्य डेटा एकीकृत गर्न वा wms / wfs सेवा गर्न सादगी संग।
- 64 बिट्समा समावेश सहित धेरै डेटाबेसमा पढ्नुहोस् / लेख्नुहोस्।
GPU सँग अन्तरक्रिया गर्न सम्भावना।
होइन कि यी चीजहरू अरूले गरेनन्, यो त्यो सामान्यतया यसले यो पहिले गरेको छ। त्यस्तै गरी, यदि हामी अरूले को सूची बनाउछौ र गुप्तिकरण हुँदैन, त्यहाँ अर्को सूची हुनेछ।
के हुन्छ यदि नवीन कार्यक्रम पर्याप्त छैन जस्तो देखिन्छ यदि अन्य कार्यक्रमहरू एक दिन त्यस्तै गर्दछ। यी धेरै नयाँ आविष्कारहरू केवल विशिष्ट प्रयोगकर्ताहरूका लागि आकर्षक छन्, विकासमा प्राथमिकता र साधारण अपरेशनमा होइन।
इमानदारीपूर्वक, तपाईको साथ ठूला दिग्गजहरू (आर्कजीस, अटोडस्क, म्यापिन्फो) र महान नि: शुल्क सफ्टवेयर (क्यूगिस, घास, gvsig) को साथ ... मनिफोल्डले के योगदान दिन्छ? तपाईं सफा पोष्टमा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ?